Hidhamtootni siyaasaa Oromoo mana hidhaa Qaallittii jiran – Kichuu
HomeAfaan OromooNewsHidhamtootni siyaasaa Oromoo mana hidhaa Qaallittii jiran
Hidhamtootni siyaasaa Oromoo mana hidhaa Qaallittii jiran
Hidhamtootni siyaasaa Oromoo mana hidhaa Qaallittii jiran kanneen gamlee Obbo Jawaar Mohammad
jalatti himatamanii jiran guyyaa 11ffaaf diddaa nyaata lagachuu kan itti fufan yoo ta’u, hidhamtoota zoonii 8ffaa keessaa gariin miidhamanii Gulukoosii fudhachaa jiraachuus maatiin OMN-tti himan.
Akka maddi OMN kum himetti, hidhamtoota siyaasaa Oromoo Zoonii 8ffaa jiran keessaa, Obbo Daawit Abdataafi Boonaa Tibbillee guyyaa kaleessaa dadhabanii kan kufan yoo ta’u, sa’atiiwwan dheeraadhaaf bakka kufanii utuu hin kaafamin turanii, dhumarra tajaaila waldhaansaa dooktera dhuunfaatiin argataniiru.
Akka miseensi maatii hidhamtootaa bakka sana ture himetti, Dookteeronni fayyaa battala gaggabuu hidhamtootaa kanaa dhaga’aniin bakka sana qaqqabanis, poolisiin mooraa mana hidhaa Dooktera dhuunfaa seensisuu diduudhaan turtii sa’a tokkoo booda akka seenan taasifamee ture.
Hidhamtoota siyaasaa kanneeniin alatti, Gaazexeessaa Mallalasaa Dirribsaas fi Obbi Dajanee Xaafaa sadarkaaa hamaarra qaqqabuu isaanii maddi keenya kun ni hima.
Mana hidhaa Qaallittii zoonii 6ffaa keessatti kan argaman Obbo Jawaar Mohammad fi Obbo Baqqalaa Garbaa dabalatee, Haamzaa Adaanaa akkasumas Shamsaddiin Xahaa haala yaaddessaafi himuun namatti ulfaatuun guyyaa 11ffaa nyaata lagataniin, deemuufi dubbachuu dadhabuurra qaqqabuu isaanii OMN odeeffateera.
Miidhamaa fi gidiraaa kana hundaaf saaxilamanis, hidhamtootni siyaasaa Oromoo kunniin amma gaaffiin isaanii deebii argatutti ammallee cichoominaan diddaa kana akka itti fufan himuusaanii gabaasuun keenya ni yaadatama.
#Diddaa_Oromiyaa!!Warra Walee walisoo Sittan bahee Anisoo Warraaqsi Dhohe.